U-Eli Roth owalathisa i-Killer Shark Movie MEG - iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	U-Eli Roth owalathisa i-Killer Shark Movie MEG
U-Eli Roth owalathisa i-Killer Shark Movie MEG
by admin Juni 16, 2015 633 imbono
Le veki iphawula iminyaka engama-40 yokuzalwa emihlathini, eyayikhutshwe ekuqaleni kwiithiyetha ngoJuni 20, 1975. I-Spielberg classic ibuyela kwimidlalo yeqonga kule mpelaveki kubhiyozelwa ngayo, kwaye ngoku kujongeka ngathi kungekudala siza kuba nembono bhanyabhanya krokre okrebe entsha ukonwabela kwiscreen esikhulu.
Ezahlukahlukeneyo waqhekeza iindaba ezimnandi ngokuhlwanje ukuba Umkhuhlane weCabin/Hostele Umlawuli uEli Roth ukwintetho zokuyalela ulungelelwaniso lwentengiso yeNew York Times Meg: Inveli yeNzululwazi enkulu yeWarner Bros, iprojekthi yokuthabatha ixesha elide ebekwizigaba ezahlukeneyo zophuhliso phantse iminyaka engamashumi amabini.
Incwadi, ebhalwe nguSteve Alten, imalunga nokrebe omkhulu wangaphambi kwembali. Ibali lijikeleza kumadoda amabini adibana kunye ukuze ayeke ukrebe wakudala osongela unxweme lwaseCalifornia. I-Megaladon, ethathelwa ingqalelo njengezona zilwanyana zinamandla kwaye zinamandla kwimbali, inokufikelela kubude obude beenyawo ezingama-60.
Zombini iiDisney kunye neNew Line Cinema ngaphambili zazama ukulungelelanisa inoveli ka-Alten, kwaye ngaxesha lithile uGuillermo del Toro waqhotyoshelwa. Iskripthi esitsha sabhalwa nguDean Georgaris, kwaye yayiziiveki nje ezimbalwa emva apho safunda iWarner Bros. yayibeka uhlengahlengiso kwindlela ekhawulezayo.
Meg ichazwe njengeIJurassic Park enokrebe, ”Kungoko sinokucinga ukuba impumelelo etshabalalisayo ye Ihlabathi leJurassic Inento encinci yokwenza nesibhengezo sanamhlanje. Abathandi benoveli baneminyaka beziva ngathi ukulungelelanisa kunokwenza ukuba ookrebe boyike kwakhona, kwaye ndicinga ukuba uRoth yindoda egqibeleleyo kulo msebenzi.
Yile nto ndiyibiza ngokuba ziindaba ezimnandi, zihlobo.